China Forged super Duplex stainless steel flanged ball valves (BV-600-01F-A) mpanamboatra sy mpamatsy | DEYE
Valim-bazaha baolina matevina super Duplex vita amin'ny vy (BV-600-01F-A)
Andiany No. BV-600-01F-A
China Super Duplex stainless steel Valve mpanamboatra DEYE manome SDSS super Duplex vy tsy miova valves valves baolina, ANSI B16.34, 1Inch, Class 600, ISO5211 ambony flanges amin'ny miboridana hazo
Valve Ball API 600
Valizy baolina sandoka kilasy 600 LB
Valizy baolina matevina Stainless Steel
Volo baolina 2 sombin-kazo sandoka
Valve valizy sandoka
Fenitra famolavolana: ASME B16.34 / API600
Vatana ara-batana: Super Duplex stainless steel ball Valve SDSS / DSS
Mitsingevana baolina SDSS
Famolavolana feno l
Savaivony nominal: 1 ″.
Fifandraisana farany: flange RF
Fomba fiasa: Bare Shaft miaraka amin'ny ISO5211 ho an'ny acteuror pneumatic
Volom-borona azo antoka, tsy miovaova ary miady amin'ny blowout
Miteraka / mampihena ny kibo
Tapitra tsy azo avela: flanged RTJ RF FF, NPT, BSP.
Fitaovana fanidiana tsy voatery
Fiasa tsy voatery: Pneumatika Actuator, Elec. Mpanentana.
Fitaovana azo avela: UNS31803, UNS32750, SAF2507, SAF2205, F51, F53, F55
Haben'ny habe: 1/2 "-24" DN15-DN600mm
Raha ampitahaina amin'ny vy austenitika, ny tombony azo avy amin'ny vy tsy misy fangarony dia ireto manaraka ireto:
1.ny tanjaky ny vokatra dia avo kokoa noho ny austenitika aorian'ny fotoana vy, ary manana henjana plastika ampy ilaina amin'ny famoronana. Ny hatevin'ny rindrina fitehirizana na sambo fanerena vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia 30-50% ambany noho ny an'ny austenite mahazatra, izay mampihena ny vidiny.
2. manana fanoherana tsara ny famotehana ny harafesin'ny adin-tsaina. Na ny vy tsy misy fangarony duplex miaraka amin'ny atiny firaka ambany indrindra aza dia mahazaka fanoherana avo lenta ny famotehana ny lozam-pifamoivoizana noho ny vy austenitika, indrindra amin'ny tontolo misy ionona amoniaka. Ny harafesin'ny adin-tsaina dia olana lehibe iray izay sarotra vahana ny vy marevaka austenitika tsotra.
3. ny fanoherana ny harafesin'ny 2205 duplex stainless steel, izay ny fampiharana mahazatra indrindra amin'ny haino aman-jery maro, dia ambony noho ny an'ny vy tsy mihaja 316L austenitika, raha ny vy super duplex kosa manana fanoherana avo lenta. Amin'ny haino aman-jery sasany, na dia ny fanoloana vy tsy misy fangarony austenitika alimo avo, ary alika mahatohitra harafesina mihitsy aza.
4. manana fanoherana tsara harafesina eo an-toerana izy io. Raha ampitahaina amin'ny austenitika vy tsy misy fangarony miaraka amin'ny atiny volamena mitovy, ny duplex stainless steel dia manana fanoherana tsara kokoa sy fanoherana harafesin'ny havizanana noho ny vy austenitika.
5. ny coefficient an'ny linear expansion dia ambany noho ny vy austenitika, manakaiky ny vy karbaona, mety ampifandraisina amin'ny vy karbaona, ary misy dikany lehibe amin'ny injeniera, toy ny famokarana takelaka mitambatra na firakofana.
6. na inona na inona fepetra ambanin'ny enta-mavesatra na tsy miovaova, ny vy tsy misy fangarony duplex dia manana fatran'ny angovo avo lenta kokoa noho ny vy austenitika, izay manana sanda fampiharana azo ampiharina ho an'ireo ampahany amin'ny rafitra mba hiatrehana ireo lozam-pifamoivoizana tsy ampoizina toy ny fifandonana sy ny fipoahana.
be mpampiasa amin'ny indostrian'ny simika arina, ny indostrian'ny petrochemical, ny rubber, ny fanaovana papermaking, ny pharmaceutika ary ny pipeline hafa ho toy ny fitaovana fanovana
Teo aloha: F53 super Duplex stainless steel 2PC ball valves (BV-600-01N-A)
Manaraka: 600LBS 4A DSS Trunnion mitaingina valizy (BV-600-06F-A)
F53 super Duplex vy vy 2PC volo baolina ...
Voasandoka duplex vy vy F53 volo baolina w ...
vy duplex vy F51 2000PSI volo baolina B ...